Kenya oo wada hadal kala galaysa Soomaaliya Dacwadda Badda, Dib u dhigidii Kadib.
NAIROBI(P-TIMES) – Sidda ay daabacday Jariirada wararka ee Bloomberg, dawladda Kenya waxay qorsheynaysaa in ay bilowdo wada hadalo heer sare ah oo ay la yeelanayso Soomaaliya, kuwaas oo ay garwadeen ka yihiin wadamo kala duwan oo saaxiib la ah xukuumadda Faderaalka, kuna wajaan sidii ay labada dal uga wada hadli lahaayeen muranka xagga dacwadda Badda ah ee horyaala Maxkamadda ICJ oo dhawaan 2 bilood dib u dhigtay.
Kenya waxay sheegtay in ay hadda raadinayso wadiiqada u furan oo ah in ay wada hadal lagasho Soomaaliya, waxayna dadaalada ugu badan ku bixinaysaa sidii ay u mari lahayd wado kasta oo u sahli karta arrintan, ayaa lagu sheegay warbixinta la baahiyey.
Wasiiradda arrimaha dibada ee dalka Kenya Haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma ayaa sheegtay in looga baahan yahay Soomaaliya in aysan wada hadalka u arkin wax aan sax aheyn, balse uu yahay wajiga dhabta ah ee ugu dambeynta.
“ Waa in xal waara loo arkaa wax wadajira ah, waxaana anaga Kenya ahaan door bidnay wada hadalka in uu noqdo xalka rasmiga ah ee arrinta Badda” Ayay tiri xoghayaha Arrimaha dibada ee dalka Kenya.
Juma waxay kaloo cadeysay in ay arrimahan kala xaajoonayaan wadamada ay labada dalba saaxiibada la yihiin, si loo helo xalwaara oo ku saabsam muranka xagga biyaha ku saabsan ee dhexmaray labada dal, kaas oo gaaray Maxkamadda Cadaaladda Aduunka.
Soomaaliya, ayaa horey u diiday wado kasta oo kabedelan Maxkamadda caalamiga ah, ka dib markii ay dhaceen wada hadalo badan oo ay labada dalba ku yeesheen meelo kala duwan, gaar ahaana dawladdii Xassan Sheekh Maxamuud oo dadaal badan galisay in lasoo afjaro muran badeedkan ay waday Kenya.
Maxkamadda ICJ ayaa dhawaan mudo dhan labo bilood oo fursad ah u siisay Kenya in ay iskugu diyaariso maxkamadda dhageysigeeda u dambeeya, waxaana ay Kenya laakiin codsatay 12 bilood, balse taasi ayaa noqotay mid aan shaqeynin, oo ay maxkamaddu labada dhinacba xalisay.